SAWIRO) Maamulka Degmada Xudur oo ku baaqey in xafiisyada Wasaaradaha KG laga furo Xudur | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta SAWIRO) Maamulka Degmada Xudur oo ku baaqey in xafiisyada Wasaaradaha KG laga...
SAWIRO) Maamulka Degmada Xudur oo ku baaqey in xafiisyada Wasaaradaha KG laga furo Xudur
Maamulka degmada xudur ayaa waxaa ay waxey kulan kuyesheen xarunta shirarka ee degmadaasi waxaana kulankaasi kasoo qeyb galey gudoomiyaha degmada maxamed macalin axmed kuxigeenada degmada’arimaha bulshada iyo mas,uuliyiin kale oo katirsan maamulka degmada xudur ee xarunta gobolka bakool.
Kulankaan oo ahaa kulankii todobaalaha ahaa ayaa waxaa looga hadlaayey waxqabadkii maamulka degmada bilihii lasoo dhaafey qorshiyaasha cusub iyo sidii loo xoojin lahaan.
Degmada xudur oo ah degmo go,doonsan ayaa xiligaani maamulka waxaa uu dadaal ugu jiraa sidii loo hormarin lahaa xaruumihii loogu adegaayey bulshada iyo sidii loo dhameystiri lahaa dhismaha xafiisyada gudoomiyaasha iyo qalabeytooda.
Sidoo kale Kulankaan oo todobaadkiiba hal mar ay yeshaan maamulka degmada xudur ayaa waxaa lagu soo hadal qaadey sidii dhamaan wasaaradaha dowlad goboleedka koonfur galbeed xafiisyo ay ugu furan lahayeen degmada xudur si isbedel horumarineed loogu sameeyo gobolka bakool gaar ahaan degmada xudur oo xarun u ah degmooyinka gobolka bakool.
Bilihii lasoo dhaafey degmada xudur waxaa laga hirgaliyey xaruumo badan oo loogu adeego bulshada dhismooyin wadooyin idaacad lagu magacaabo (Radioxudur) oo lagu wacyi galiyo bulshada’xafiiska wasaarada garsoorka iyo cadaalada KG’qodis iyo dib u habeen ceelal biyo ay kacabaan bulshada degmada iyo adeegyo kale.
Dhanka kale saraakiisha ciidamada kala duwan ee kusugan degmada xudur waxey xooga sareen sidii ay u sugi lahayeen amniga guud ee degmada iyo degaanada kale ee katirsan Gobolka Bakool